Nzira yekuwana sei visa yeGhana kubva kuCanada?
April 17, 2022 Demi Canadian, Ghana, visa
Kuti uwane vhiza yekugara kwenguva pfupi muGhana yekushanya kana yebhizinesi iri nyore kune mazhinji mapasipoti epasi. Nzira yekuwana sei visa yeGhana kubva kuCanada? Chikumbiro chemagetsi chevisa yekuGhana
Nzira yekuwana sei basa kuGhana? Gwaro rinokurumidza kumunhu wese, mutorwa uye wekuGhana
March 15, 2022 Demi Ghana, mabasa
Wese munhu anoda kuwana basa kuGhana anofanira kutanga awana basa kuGhana. Kutanga kwakanaka kunogona kuve webhusaiti yebasa seJobDirecta Ghana, Jiji gh kana Ghana Yello. Unogona kutsvaga masangano ekutsvaga basa kana